Iimephu zikaGoogle ziya kuvumela iimephu zokukhuphela kunye nokuhamba ngaphandle kweintanethi | IPhone iindaba
Iimaphu zikaGoogle ziya kukuvumela ukuba ukhuphele kwaye uhambe ngaphandle kweintanethi
Xa sithetha ngokusetyenziswa kwemephu, eyokuqala ethi qatha engqondweni yile iimaphu zikagoogle. Njengazo zonke izicelo zasimahla ezisungulwe yinkampani yokukhangela, uGoogle Maps unandipha ukuthandwa kakhulu kwaye ufakwe kwizixhobo ezininzi, into ezingazigcini izixhobo ezininzi ze-iOS. Olunye usilelo olunazo kwiimephu zikaGoogle kukuba iimephu zabo azinakukhutshelwa (hayi ngendlela elula kwaye enomdla) kwaye le yinto uGoogle afuna ukuyitshintsha.
Izolo ngoLwesibini, uGoogle ubhengeze ukuba uza kuhlaziya isicelo sakhe kunye neyona nto intsha sinokuthi siyenze khuphela iimephu ukuze ujonge kwaye uhambe ngaphandle kweintanethi kwi-Intanethi. Singakhangela isixeko, iphondo, ikhowudi yeposi okanye nayiphi na indawo emephini emva koko ucofe ku «Khuphela». Ngelo xesha, siza kubona imephu yokukhetha eyona ndawo sifuna ukuyikhuphela, sikwazi ukukhetha kwindawo yokuhlala kwindawo enobungakanani besiqingatha selizwe laseWashington. Okwangoku kubonakala ngathi asinako ukwahlula xa sijonga ezinye iimephu sisebenzisa isicwangciso sedatha kwaye xa sibona ezi sizigcinileyo kwi-smartphone yethu, into enokutshintsha xa kukhutshwa ingxelo yokugqibela.
Ngemephu ezikhutshelwe kwisixhobo sethu siya kuba nethuba loku uzulazula njengakuyo nayiphi na inqanawa ye-GPS kwaye ukhangele amashishini okanye iindawo ekuya kuzo, zonke ngaphandle kokunxibelelana ne-intanethi. Ukuba unxibelelwano lwethu lubonisa amahla-ndinyuka, usetyenziso luya kutshintshela phakathi kukhetho olukwi-intanethi nangaphandle kweintanethi, into esele isetyenziswa kuGoogle Play Music nalapho kungekho mahluko uqatshelwayo Xa usetyenziso lusebenzisa uqhagamshelo oluzinzileyo, nokuba luselfowuni okanye iWi-Fi, luya kutshintshela ngokuzenzekelayo kwimowudi ye-Intanethi ukuqokelela ulwazi.
Ekuqaleni, ngokungafaniyo nezinye iinkonzo okanye usetyenziso (ayizizo zonke, ewe), ziya kufumaneka kuhlobo lwe-Android kuphela, Kodwa kungekudala izakufika nakwi-iOS. Into engacacanga ncam yile yokuba ngaba iindawo ezingafumanekiyo okwangoku ziya kufumaneka nge- «ok iimephu» zomyalelo, eyindlela yokukhuphela iimephu ezikhoyo ngoku ezingenakho ukukhuphela iindawo ezinje, umzekelo, indawo endihlala kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Iimaphu zikaGoogle ziya kukuvumela ukuba ukhuphele kwaye uhambe ngaphandle kweintanethi
Kwaye uthini nge-WAZE ngoku ekwiGoogle? Ngaba izakunika iimephu ezingadingi intanethi?
Kwintetho yam i-Waze isebenza kakuhle kunye neendlela zokuphepha ukumelana kwezithuthi kunye nokukuxwayisa ngeekhamera ezikhawulezayo, ezingcono kuneGoogle Maps kunye ne-Apple Maps, kodwa zonke ezi datha zifunxa 🙁
Ndithengile i-TomTom app engaxhunyiwe kwi-intanethi kunye nohlaziyo lobomi, kodwa ayiboneleli ngezithuthi ezithembekileyo. (Ndizamile nangenyanga)
Sebenzisa apha iimephu. Ukugqibelela kwi-intanethi. Iimephu zamazwe onke.
UHernan Simet sitsho
Oku kunokuba sele kwenzelwe iidolophu ezininzi. Kuya kufuneka ubhale ii-MAPS ezilungileyo kwindawo yokukhuphela, kwaye uyigcine okwexeshana kangangeentsuku ezingama-30 okanye ezingama-45, andikhumbuli ngokuchanekileyo.
Phendula uHernan Simet
Lumkela iAgentAgent, ibiba iphasiwedi yakho ye-Instagram
2x10 Podcast ye-Actualidad iPad: I-Apple Music iza kwi-Android nangaphezulu